फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - लाजनारायण
लाजनारायण लक्ष्मण गाम्नागे
नमस्कार ! मलाई चिन्नुभयो होला । पाठकले पाठकलाई नचिन्ने कुरै भएन । नाम त के बताऊँ ! आफ्नो नाम बताउन आफैँलाई लाज लाग्छ । केहीले मेरो नाम लाजनारायण राखेका छन्, त्यही सम्झिनुस् । तपाईंलाई थाहै छ, एउटा इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकसँग मैले लिएको ७८ लाख रकमका पछाडि संसारै लागेको छ अहिले । सबैको मनशान्तिका लागि यस विषयमा मेरो प्रस्टीकरण पेस गरेको छु । लाज नमानी पढिदिनुहोला ।
खास कुरा के हो भने त्यो कलेजका सञ्चालकबीच लफडा रहेछ, त्यहाँभित्र ठूलो भ्रष्टाचार रहेछ । मेरोमा सो कुरा आएपछि सञ्चालकबीचको झगडा समाप्त होस् र भ्रष्टाचार निमिट्यान्न होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले त्यो रकम समातेको थिएँ । अझ भनौँ, म जीवनभरि वकालत गरेको मान्छे, झगडिया आएर ’रिक्वेस्ट’ गरेपछि मैले नाइँ भन्न सकिनँ । त्यो घुस थिएन, मध्यस्थता शुल्क थियो । जहाँसम्म काम नगरिदिएपछि पैसा फिर्ता नगरेको कुरा छ, यो त स्याललाई मासु पैँचो दिएर फिर्ता गरेन भनेजस्तो फट्याइँ मात्र हो । पैसा फिर्ता गरेको भए म उनीहरुको नजरमा डरपोक, नालायक ठहरिन्थेँ ।
म स्वयं भ्रष्टाचार रोक्ने निकायको जिम्मेवार अधिकारी भएकाले कतै घुस खोज्दै हिँड्ने कुरा भएन । तिनीहरुलाई पनि म खोज्दै गएको होइन, आफैँ आएर जबर्जस्ती पैसा थमाएका हुन् । ठूलै समस्यामा परेको चाल पाएर दोस्रो, तेस्रो किस्ता मात्रै मैले माग्न थालेको हो । तर एकदमै बदमास रहेछन्, पहिला पैसा दिने, पछि फिर्ता माग्ने, फेरि भिडियो पनि खिच्ने अनि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने । ममाथि तिनीहरुले ठूलो अन्तर्घात गरेका छन्, पीडित बनाएका छन् । म पीडकमाथि कारबाहीको माग गर्छु ।
मैले उनीहरुलाई भनेको थिएँ, म प्रमुख आयुक्त बनेपछि सब काम तमाम गरिदिउँला, तर सरकारले मलाई मौकै दिएन । म प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनको मान्छेलाई अख्तियारमा नियुक्त गरेर सरकारले सुरुमै फसायो, पछि प्रमुख आयुक्त नबनाएर फेरि धोका दियो । अतः मबाट हुन गएको अनैतिक कार्यका लागि सरकारले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । मेरो आनीबानी थाहा पाएर मलाई नियन्त्रण नगर्ने प्रमुख आयुक्तको पनि ठूलो गल्ती छ । त्यसैले वाइडबडी जहाजको समस्या मिलाएजस्तै हामी मिलेर यसलाई पनि मिलाउनुपर्छ ।
मैले त्यति सम्मानित पदबाट राजीखुसीले राजीनामै दिइसकेँ । अब मलाई थप कारबाही गर्ने प्रश्न आउँदैन । तर सुन्दैछु, कानुन तानतुन गरेर कारबाही गर्ने कुरा । यो कुरा सुनेर म ओछ्यान नै परिसकेँ । डिप्रेसनमा गइसकेँ । अब मलाई मुद्दा हाल्ने काम गर्नु बेकार छ । घुस लिएको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने मैले अदालतले कुनै जरिवाना तोक्यो भने कसरी तिर्न सक्छु ? अनि जेल जाने कुरा आयो भने त हर्टअट्याक भएर तुरुन्तै ढलिहाल्छु । त्यसैले मलाई बाँकी जीवन शान्तिपूर्ण रुपमा व्यतीत गर्ने अवसर दिइयोस् । बरु म आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति छोराछोरी(पत्नीको नाममा समर्पित गरेर कुनै आश्रमतिर जान्छु, अग्रजहरु गएको बाटो जान्छु । दिगम्बरजीलाई जस्तो मलाई कुनै पदमा नियुक्ति गर्ने चेष्टा सरकारले नगरोस् । यदि गर्छ भने भगवान् कसम ! म एकदमै इमानदारीसाथ काम गर्नेछु । कसैलाई कुनै भिडियो खिच्ने मौका दिने छैन । आगे सरकारको जो दया !
नेपाल, फाल्गुन १४, २०७५